देशको राजनीति विकासमा अवतरण : प्रम ओली « ABC NEWS NEPAL | No.1 News channel of Nepal
देशको राजनीति विकासमा अवतरण : प्रम ओली
काठमाडौं २१ असोज । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सशस्त्र द्धन्द्ध र सङ्क्रमणकालबाट देश विकास र राजनीतिक स्थिरताको बाटोमा अवतरण भएको बताउनु भएको छ । एबीसी न्युज टेलिभिजनका अध्यक्ष तथा प्रधानसम्पादक शुभशंकर कंडेलद्धारा लिखित अवतरण नामक पुस्तकको विमोचन समारोहमा बोल्दै ओलीले सही समय पुस्तक लेखिएको भन्दै लेखकको प्रशंशा गर्नुभयो ।
पुस्तकको प्रधानमन्त्री ओली र पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संयुक्त रुपमा लोकापर्णण गर्नुभएको थियो । पुस्तक विमोचन समरोहमा बोल्दै पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले लेखकले सशस्त्र संघर्ष र संक्रमणकालको सटिक विश्लेषण गरेको बताउनु भयो । प्रचण्डले आफूले युद्ध सुरु गर्ने बेलादेखि नै शान्तिपूर्ण राजनीतिक बाटोमा जाने उद्धेश्य राखेको विषयलाई लेखक कंडले सबैभन्दा सुन्दर ढंगले विश्लेषण गरेको भन्दै प्रशंशा गर्नुभयो ।
कार्यक्रमममा नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालले पुस्तकले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको चिरफार गर्दै शान्ति प्रक्रियालाई समेत सही तरिकाले समेटको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
अवतरण पुस्तकको समीक्षा गर्दै पूर्व मन्त्री तथा कूटनीतिज्ञ रमेशनाथ पाण्डेले पुस्तक तथ्य र सत्यमात्र रहेको दावी गर्दै अवतरण पुस्तकले नेपाली राजनीतिक इतिहासको नयां ढंगले व्याख्या गरेको बताउनुभयो ।
पुस्तककको टिप्पणी गर्दै प्रा. कृष्ण खनालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका बारेमा आफूले अवतरण पुस्तकबाट धेरै कुरा बुझ्न पाएको बताउनुभयो ।
पुस्तकमा १६ अध्यायमा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको संक्षिप्त विश्लेषण सहित एमाले माअ‍ेवादी एकताको भित्री पाटो केलाएको छ । पुस्तकमा प्रम ओली र प्रचण्डको पासपोर्ट कपी राखेर उनीहरुको वास्तविक नाम के हो भन्ने भ्रम निवारणगरिएको छ । त्यसो त एमाले माओवादी एकताका सन्दर्भमा अप्रकाशित ०७५ जेठ २ गते भएको ५ बुंदे सम्झौता पत्र समेत पुस्तकमा राखिएको छ । पुस्तकमा तत्कालीन एमाले महासचिव माधव नेपालले प्रचण्डहरुसंग भारतका विभिन्न सहरमा गएर भेटेका बेलामा संस्मरण र डायरी समेत समेटिएको छ ।
पुस्तक ६४८ पृष्ठको छ भने मूल्य मोटो गाताको १२५० रहेको छ । पुस्तकको प्रमुख वितरक पैरवी प्रकाशन एम हाउस रहेको छ ।